Nkọwapụta ọdụ ụgbọ elu Istanbul nke Hava-Sen | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulNkọwa nke Hava-Sen si ọdụ ụgbọ elu Istanbul
12 / 11 / 2019 34 Istanbul, General, Ụgbọelu, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Nkọwa nke ikuku nke si na ọdụ ụgbọ elu istanbul
Ọnọdụ arụ ọrụ na-adịghị mma nke ndị ọrụ TGS na-arụ n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul na-aga n'ihu. Ndị ọrụ ndị ọrụ ụgbọelu (Hava-Sen) kwuru na ha kwesịrị iche maka ndị ọrụ a n'agbanyeghị na ha abụghị ikike azụmaahịa enyere ikike ma depụta ọtụtụ isiokwu metụtara ọnọdụ ọrụ ndị a.
Ọnọdụ ọnọdụ ọjọọ nke ndị ọrụ Turkey Groud Service (TGS) na ọdụ ụgbọ elu Istanbul na-aga n'ihu. N’ihi ịdị anya site n’ọdụ ụgbọ elu ruo na ebe obibi, oge a na-ebugharị na ogologo awa ọrụ mere ka ndị ọrụ ahụ ghara inwe obi ụtọ, mana enwere okwu dị ịrịba ama banyere okwu ahụ.
Uz Anyị na-akpọ ndị ọrụ nchịkwa ha ka ha chee echiche banyere ụkpụrụ mmadụ na iwu, ziga njikọ ahụ na nkwupụta.
Nkowa Hava-Sen bu ndi a:
Ndị ọrụ na-ahụ maka ụgbọ elu Sivil,
Anyị agbaso mmezu nke 26.TİS, nke ị maara nke ọma gbasara nkwadebe ya na usoro nnabata ya, nwa oge mgbe ị bịanyere aka, n'agbanyeghị adịghị ike ya na mmejọ ya niile. TİS bụ akwụkwọ kacha mkpa na-echebe ikike na ọdịmma nke ndị ọrụ. Ime uche dị ezigbo mkpa. Enweghi ike imeghari ya site na usoro ndi ozo ma obu nzuzo. 26. Anyị etinyeghị aka na TIS wee chọpụta nyocha nke ọnọdụ nke usoro iwu ga-achịkwa. Anyị chọrọ isoro gị kerịta nsonaazụ ya ka ị mata ihe ndị bụ eziokwu.
1. 26, agbanyeghi ịdọ aka ná ntị anyị niile, bụ ihe ngwọta maka ihe ịma aka nke ịkwaga New Ebe. E tinyeghị ya n'ụzọ ọ bụla na TIS. Ugbu a anyị ahụla na ọ dị mwute ikwu na anyị kwuru eziokwu. A ka nwere nnukwu ihe isi ike n’ime na n’ime. Ọrụ adịghị enye ndị ọrụ na ndị na-aga ọrụ aka ọrụ ha ihu nnukwu nsogbu. 9 na-ewe oge elekere. Ndị na-eme ọrụ ga na-elekọta onwe ha. Ndị ọkwọ ụgbọ ala bụ nsogbu dị iche. Anyị enweghị ike ịkọ etu ndị enyị anyị ga-efunahụ n’ọrụ, ọrụ ole ndị enyi ga-enwe ihe ọghọm. Oge 13-4 mụbara ogologo ije kwa ụbọchị nke ndị ọrụ ala na-arụ ọrụ na nnukwu ọdụ mpaghara. Enweghi ike idozi nsogbu nke ndị ọrụ na ụlọ mposi na njem nke ndị ụgbọ elu n'etiti ụlọ otu, mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri, ọnụ ụzọ mbata na ọpụpụ na ọdụ ụgbọ elu.
2. Otu n'ime nkwa ndị a ga-edozi ma emesịa na 26.TİS bụ 95 nke gụnyere görev iwu nke ọrụ na ndị otu ndị ọzọ ”. Otu tozuru etozu enweghi ike ịga n'ihu n'okwu a nke kur anyị hibere, anyị na-arụ ọrụ ya. Dịka HAVA-SEN, anyị na-aga n’ihu ọmụmụ ọmụmụ SHT-FTL kwa ọnwa Mkpa okwu ndị dị mkpa ka ịhazi na arụ ọrụ na izu ike nke ndị otu ụgbọ elu apụtalarị. 95 maka abamuru nke onye ọrụ site na ịkọwapụta uru na ọghọm nke SHT-FTL. ndị otu tozuru etozu anaghị eme mgbalị dị mkpa iji guzobe ihe ndị dị na edemede a. Otu n'ime ikike anyị kachasị mkpa, dị ka N 03 n'oge mpaghara: 00 yana imechi ọrụ n'otu ụbọchị ahụ "," enweghị ike inye ya site na ụbọchị ụlọ "ọzọ, enweghị ike ịmalite ozugbo ngwụsị nke ụbọchị n'efu (00: 00 local) önemli ikike anyị 26. oge Tis'de agunyeghi. Ọnwụ ikike ndị dị otú ahụ ha nwetara bụ ihe megidere kpamkpam mmụọ nke ịdị n'otu ahịa. Njikọ ahụ ekwesịghị ida, ọ kwesịrị imeri. Anyi na-akpọ ka iweghachi ikike ndị ekwere na ndị otu ụgbọ elu ga - esite na ya ga - enye iwu na ewepụtaghị ya.
3. Kwa ọnwa, a na-eburu ndị ọrụ ụlọ ọrụ 500-700 site na ụgbọ elu ahụ n'okpuru aha ọzụzụ pụrụ iche ụlọ ọrụ na-akwụghachi ụlọ ọrụ ahụ ụgwọ akwụghị ụgwọ ụgbọ elu ha. Mana n'otu oge ahụ, ekwuputala 700 maka ịnabata ndị ọrụ ụlọ ọrụ. Ọnọdụ a, nke yiri ka ọ na-emegide onwe ya, na-egosi na ebumnuche bụ iwepu ndị ọrụ nwere ahụmahụ ozugbo enwere ike, iji dochie ndị ọrụ A0, iji belata mmefu ụgwọ ọnwa. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ enweghị usoro ọrụ ntinye aka na ntanetị, ha aghọtaghị na e dere ụgbọ elu na ọbara. Ha amaghi ihe okenye na ahuhu ya putara. Njikọ ahụ na-ejide efere. N’ezie, ndepụta nke ụlọ ịdebanye aha n’ibi ụlọ nke a na-akwadebe abụghị ihe ezi uche dị na ya, kama isi nke enweghị mmasị na ịkpa ọchị.
4. Companylọ ọrụ ahụ akwụsịla ịzụta ụgbọ ala ahụ. N'ezie, enweghi ihe kpatara 24 MAX iji fee, mana a na-ewere ya na 2020 ga-efe efe site na ọnwa ndị mbụ. Ọzụzụ na-ewe oge. Mana dị ka anyị hụburu, ụgbọ elu eburu ụzọ biaziezie ìgwè dị iche iche. Mgbe ezughị, a na-ebugharị onye ọkwọ ụgbọ ala. Lọ ọrụ dịka Thomas Cook, Jet Airways, Germania, dara na ọdụ ụgbọ elu ụwa. Ryan Air na-ama jijiji. Yabụ enwere nnukwu ego nke ndị njem ụgbọ ala mba ọzọ n'ahịa. Ọ dị mfe imechi oghere ahụ. Ma inye umuaka ndi uko mmiri nke Turkey ka odi ha ezigbo nsogbu. Ọ dịkarịa ala, ndị ọkwọ ụgbọ elu ruru ọkwa iru eru na nkwekọrịta kwesịrị ka enyere ohere.
Okwu ọzọ bụ na ọ bụ ihe nwute na a naghị eweghachite ego nke ndị gụsịrị akwụkwọ na Mahadum ahụ n'agbanyeghị nkwa na ọrụ dị ukwuu. Nrigbu na-aga n'ihu ma ọ nweghị ụda ọ bụla sitere na njikọ ndị ahịa ruru eru.
5. Dị ka a ga-echeta na ntinye akwụkwọ akụkọ anyị mere na 29 May 2019, ọnụahịa ịkwaga, ihe isi ike nke ogige ọhụrụ, ibelata ndị njem na ihe isi ike ego n'ihi mmepe na njikọta, dị ka na mbụ, anyị ga-atụfuru 1500 volatility ma ọ bụ mee usoro dị mkpa iji belata mmụba ụgwọ ọrụ. N'ime nke a, ndị otu nyere ikike wedara mgbada ahụ, na-ekwu na ndị ọrụ ahụ kwenyere ya n'ihi nsonaazụ echiche ọha mmadụ na-ezighi ezi. Ugbu a, anyị erutela otu ebe. Otu onye nnọchi anya otu ahụ kwuru na ha na-arụ ọrụ n'okwu a. Anyị etinyetụbeghị aka na ego. Anyị chere na agakwuru uru emepụtara ga-enweta ụgwọ ọrụ. Agbanyeghị, a maara ihe n'otu ahụ dị ka 'achịcha', anyị na-adọ ndị na-arụrụ ọrụ aka na ntị ka ọ ghara ịgakwa n'otu ụzọ ahụ ọzọ. Nwelarị mmetụta nke ịbụ onye na ntụkwasị obi kpamkpam. Nloghachi na ụlọ ọrụ anyị ga-abụ uru ma ọ bụghị ọnwụ. Tozọ iji belata mmefu abụghị ileghara ụgwọ ọnwa ndị ọrụ. Njikọ a dị maka igbochi njehie ndị a, ọ bụghị ịbụ ngwaọrụ maka omume na-emebi ndị ọrụ.
6. Ndị enyi TGS kwuru na ha nọ n’okpuru nrụgide na ike ọgwụgwụ. Anyị adịghị agbagha usoro nke TGS, njikwa na atumatu akụ na ụba. Kaosinadị, ọrụ ha dị ezigbo mkpa ma baa uru maka THY. Ka o sina dị, a na-ewepụ ihe karịrị otu narị ndị ọrụ kwa ọnwa, a na-amanye ndị ọzọ ka ha mee ụdị mmeso ọjọọ niile n'ihi achịcha. Nhazi nke iwu dị nwute, na-achọ ikike ịgakwuru onye ọ bụla chọrọ, mana a na-akpọ ya '' n'èzí ọnụ ụzọ ''. A ga-ajụ ajụjụ maka ogo ọrụ enyere n'okpuru ọnọdụ ndị a. Maka anyị, enwere ike ịkwado nchekwa na nchekwa nke ụgbọ elu site na ntinye aka na aka onye ọ bụla. Otu n'ime larịị dị na 'Switzerland Chese' theory bụ TGS. Anyị na-akpọ ndị njikwa ha ka ha tụlee ụkpụrụ mmadụ na iwu.
Ezigbo ndị ọrụ, agbanyeghị na anyị abụghị ndị ọrụ nyere ikike, anyị ka ga-enyere gị aka na ọnụnọ anyị. Ọ bụ ọrụ dịịrị anyị ịkọtara gị eziokwu n'ihu gị. Anyị ga na-eme ike anyị ichebe ikike gị na iwu gị. Ihe ndi mmadu n’etughari n’ihu n’iru ga abawanye mkpa na uru anyi di Yabụ, anyị na-atụ anya ka ị nọrọ na njikọ gị.
102 TL si na Haksen ka Memur-Sen
Ezigbo uzo si Çetin Altun sitere na onye njem ụgbọ njem-Sen
Jizọs, onye njikwa ọhụụ nke TCDD site na Officernye Ọdụ-Sen…
GỤKWUZI Nleta na Turkish Transportation-Sen
Onye nlekọta na-eleta Minista Arslan
Onye enyemaka ndị isi na TCDD sitere na Ọdụ Transportgbọ njem-Sen…
Site na Ọdụ -gbọ njem-Sen ruo TCDD General Manager Uygun '
Ministrylọ Ọrụ Maka Transportgbọ njem na akụrụngwa Istanbul…